Tech Archives - Sharemal
Knowledge, Tech, World
လောလောလတျလတျ Huawei နဲ့ Google ကွား တတျထားတဲ့ ပွဿနာကွားမှာ Apple ကလညျး ကွားညှပျနတေဲ့ သတငျးတှကေို စာဖတျသူပရိတျသတျကွီးတို့ ကွားဖူးမှာပါ။ အခုပွောပွမယျ့ အကွောငျးအရာကလညျး ဒီအကွောငျးအရာတှနေဲ့ စပျဆကျနပေါတယျ။ iPhone ရဲ့နောကျကြောမှာ Designed by Apple in California. Assembled...
Unicode အခြို့လူတှကေ လညျပတျသှားလာစရာတှသှေားဖို့အတှကျ L.A မွို့ကိုသှားကွပါတယျ။ L.A မှာ ကစားကှငျးတှနေဲ့ Hollywood stars တှရေဲ့ Walk of Fame နရောမြိုးတှရှေိသလို အာကာသ ယာဉျပြံ company တှဖွေဈတဲ့ space-x company တှလေညျးရှိပါတယျ။ အခုပွောပွမယျ့ rocket...
ဒီနေ့ အများစု သုံးသလို အင်တာနက်ကို နိုင်ငံတကာမှာ လွတ်လွတ်လ့ပ်လပ်သုံးလို့ရပေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ အင်တာနက်ကို လွတ်လပ်စွာသုံးခွင့်မရှိပါဘူး။ Facebook, Google နဲ့ အခြား service တွေကို တရုတ်ပြည်မှာ အစိုးရကိုယ်တိုင် တားမြစ်ထားပြီး သုံးခွင့်ပါ ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တရုတ်က ကိုယ်ပိုင် အင်တာနက်ကို ဘယ်လိုထွန်းကားအောင်...
Knowledge, Lifestyle, Tech, World
ဒီမေးခွန်းအတွက် အဖြေက အခုထွက်လာပါပြီ။ ကမ္ဘာမှာ အချမ်းသာဆုံး ဖြစ်တဲ့ Amazon သူဌေး Jeff Bezoz က မိန်းမနဲ့တရားဝင်ကွာရှင်းလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုကွာရှင်းလိုက်တာက လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးကို ထိခိုက်ရုံသာမက ရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့Amazon ၀န်ထမ်းတွေကို များစွာထိခိုက်စေပါတယ်။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ လင်မယားကွာရှင်းတဲ့အခါမှာ...
ဒီကနေ့ သိလိုသမျှအားလုံးကို အလွယ်တကူ အင်တာနက်မှာ ရှာလို့ ရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ သူသာမရှိရင် လူတွေ ဒီနေ့ ခေတ်မှာ အင်တာနက်မှာ သိလိုသမျှကို အလွယ်တကူ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ ပုံပြင်လေးက ဒီလိုအစ ပြုခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ မတိုင်ခင် နှစ်သုံးဆယ်တိတိမှာ Tim...
Online Learning ဆိုတာက ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရရင် အွန်လိုင်းမှာ ပညာရပ်တွေကို လေ့လာတာကို ပြောတာပါ။ ဒီအကြောင်းအရာက နိုင်ငံခြားက ကျောင်းသားနဲ့အလုပ်ခွင်မှာ လုပ်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေအတွက်တော့ မိတ်ဆက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြားက ကျောင်းတွေမှာ စာသင်တဲ့အခါမှာ ဆရာက စာအားလုံးကို တစ်လုံးမကျန်သင်တာထက် ကိုယ်တိုင်ပိုလေ့လာနိုင်အောင် ကျောင်းသားတွေကို...
Microsoft ရဲ့ Hololens2(သို့ မဟုတ်) လူတိုင်းဝယ်ယူလို့ မရနိုင်သော ပစ္စည်း။
ခေါင်းမှာ မျက်မှန်အကြီးစားလိုလို တတ်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်း Virtual Reality ကို မြင်ဖူးတဲ့လူတွေ မြင်ဖူးကြမှာပါ။ ဒီနေ့ ခေတ်မှာတော့ VR တွေ AR တွေပေါ်လာပြီး Microsoft ကတော့ Hololens2ကို မကြာသေးမီရက်လောက်ကပဲ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုက ဒီပစ္စည်းကို လူတိုင်းဝယ်ယူလို့ ...
လူသားတွေရဲ့ တီထွင်မှူနဲ့အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာသော စက်ရုပ်ကမ္ဘာ။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငါးဆယ်လောက်က စက်ရုပ်တွေက လူသားတွေကို အစားထိုးသွားမယ်ပြောကြပါတယ်။ ဒီစကားက ဒီနေ့ မှာရော မှန်ပါသလား။ မှန်သင့်သလောက်လည်း မှန်နေသလို အလုံးစုံမှန်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စက်ရုပ်ကမ္ဘာမှာဆို အလိုအလျောက် သင်ယူနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စက်ရုပ်တွေတောင်ပေါ်နေပါပြီ။ အင်္ဂလိပ်လို (Arificial Intelligence) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ စက်ရုံတွေမှာ လူအလုပ်သမားတွေထက် စက်ရုပ်တွေကို ခိုင်းလာကြပါတယ်။...
How To, Knowledge, Lifestyle, Tech
Facebook နဲ့သင်
တစ်နေ့ တာလုပ်ငန်းစဉ်မှာ Facebook ပွတ်တာကလည်း လူတွေအတွက် အလုပ်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ Facebook ကို လူကြီး၊ကလေး လူငယ် လူတန်းစား ပေါင်းစုံသုံးကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်မှာ သတင်းတုလုပ်တဲ့ လူတွေ နောက်ပီး စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျတဲ့လူတွေ သုံးတဲ့အခါမှာတော့ Facebook ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ Facebook...
Lifestyle, Tech, World
လူကြီးတွေ အတွက်ဆော့စရာ စက်ရုပ်လေး (သို့ ) Vector
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဓါတ်ခဲလေးထည့်ပြီး လှူပ်တုတ်လှူပ်တုပ်လေးသွားတဲ့ စက်ရုပ်လေးတွေ့ ရင် အိမ်ကိုငိုယိုပြီး ပူစာဖူးပါတယ်။ စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆို အဲ့စက်ရုပ်လေးသက်တမ်းက အများဆုံး တစ်နှစ်တောင် မခံကြပါဘူး။ အခု ဒီတစ်ခေါက်ပြောပြမယ့် အကြောင်းကလည်း ချစ်စရာ စက်ရုပ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်အစားက လက်တစ်ဖ၀ါးစာပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီစက်ရုပ်လေးလုပ်နိုင်စွမ်းက အံ့မခန်းပါပဲ။...